Monthly Bonus For July 2020 ? Bronze ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 840 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Mi Mi Ko (FB-001314) Point Thae Mon (FB-000498) Zar Zar Thin (FB-000087) Htay Htay Linn (FB-003014) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Bronze Agent တို့ July လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 840 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Bronze အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 840 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (2) သိန်း (3) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Bronze ? Beaute Cafe အထုပ် 200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Mya Mya Win (FB-001379) Zun Pwint (FB-000643) Ruby Aye (FB-000092) Khin Nyein Chan (FB-000189) Lay Aye (FB-000116) May Myat Thu (FB-000819) Nay Chi (FB-000459) Soe Soe Kyi (FB-001293) Phyu Sin Soe (FB-006725) Soung Oo (FB-000053) Moe Sandar (FB-008505) Yin Lae Aye (FB-007840) Myint Myat Thu (FB-006715) Thet Htar Wai (FB-000144) Nwet Mar Win (FB-000441) Zar Zar Phyu (FB-000384) Chein Htay Mu (FB-000350) Win Min Thant (FB-001453) Zar Chi Maung Myint (FB000718) Khin Yu War Htun (FB-000023) Shwe Zin Oo (FB-003783) Khin Nyein Nyein Aye (FB-000602) Tin Moe Thu (FB-000101) Moe Thuzar Tun (FB001134) Aye Yu Khaing (FB-001615) Nay Chi Tun (FB-001411) Thet Thet Aung (FB-004574) Khin Thuzar Kyaw (FB-000076) PannNu (FB-000042) Lahpai Ja Bawk (FB-001003) San Hla Win (FB-001006) Nan Myint Myint Sein (FB-005887) Khin Khin Latt (FB-000177) Khine Mar Myint (FB-003500) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Bronze Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 200 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Bronze Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (1) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Mya Mya Win (FB001379) Phyu Phyu Aung (FB000343) Khin Mar Win (FB000424) Ae Nge (FB006285) Pan Su Naing (FB000432) Hsu Yi Win (FB000437) Theingi Htun (FB001117) Thet Su Myat (FB004075) Wint Wah Phyu (FB002254) Htar Su Nadi (FB000634) Thida Hlaing (FB000565) Thet Thet Su Wai (FB000620) Naw Win Ni Htike (FB003960) Su Myat Naing (FB001856) Ei Myat Mon (FB001332) Shwe Zin Yu (FB000524) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Myint Myint Than (FB000001) Khin Nandar Kyaw (FB000728) Thu Thu Aung (FB001187) May Zin (FB001995) Lwin Lwin Aung (FB000208) Hnin Moe Aye (FB000417) Yin May Win (FB001034) Maw Li Zar (FB000058) Khin Thaw Tar Tun (FB000095) Aye Phyu Phyu Aung (FB003032) Khaing Zin Win (FB000077) Khin Myo Latt (FB000484) Win Mar Lar (FB001767) Aung Zaw Latt (FB006553) Win San Dar (FB006365) Ei Ei San (FB001921) Nyein Ei Ei Htwe (FB003870) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို ဆပ်ပြာတုံး 840 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Aye Thida Cho (FB001996) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Aye Thida Cho !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 840 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (2) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ei Ei Thae Po Khin Saw (FB000014) Hnin Wai Soe (FB000050) Thet Htar Wai (FB000144) Khin Thuzar Kyaw (FB000076) Aye Chan Myint Myat (FB002336) Ei Ei Phyu (FB000080) Zar Chi Maung Myint (FB000718) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Bronze Agent တို့ !!! June လအတွင်း ဘူး 200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Bronze Agent? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (၁)သိန်း(၄)သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။